Peptides Ukwakha umzimba - lo mkhaya izidakamizwa, ngesisekelo yamangqamuzana okuyinto zakhiwa α-amino acid izinsalela axhunyiwe e neketanga ngu peptide izibopho. Kungenzeka compounds zemvelo noma zokwenziwa eziqukethe amashumi, ezinkulungwaneni noma amayunithi monomeric - amino acid. Eqinisweni Akwaziwa ukuthi amaprotheni yakhiwa amino acid, emelela links chain. Zikhona ngobukhulu ezahlukene: eside, banayo eziningi ama-amino acid kanye peptides iDemo ehlanganisa amayunithi 2-3 kuphela. Amakilasi izidakamizwa zahlukahlukene ngempela. Lezi izindlela usebenza i umzimba imisebenzi zokulawula ezahlukene. Esihlokweni sethu sizozama cabanga kuphela labo peptides sawo esiningi, isetshenziselwa ukuthuthukisa ukusebenza ngokomzimba of abadlali.
Namuhla emakethe ungakwazi ngokuvamile ukuthola imithi ukuthi bamele ivuselela hormone ukukhula. Ngakho, senza uhlu peptides best sawo esiningi:
Iqembu ghrelin (GHRP), akha abahlukene isiqongo amaqoqo ngemva kokusebenzisa. Lihlanganisa izidakamizwa "Ipamorelin", "Hexarelin" futhi "GHRP 2/6".
Iqembu ozokusebenzisa (GHRH). Le mithi kubangele undulated ups okuhlushwa uma ufaka umzimba. Okungukuthi, GHRH kwandisa uketshezi we GH, kodwa akwephuli ijika ngamandla. Leli qembu kuhlanganisa izidakamizwa "Sermorelin" futhi "CJC-1295."
Abantu abaningi ngempela awazi umphumela peptides uyazibuza ukuthi ukusebenzisa amathuluzi amasha, uma usunayo i-hormone ukukhula wokufakelwa? Impendulo yalowo mbuzo iwukuthi kunalokho banal: bona (imithi emisha) izinzuzo ngaphezulu. Khona-ke abakhululiwe eziyinhloko:
- lezi peptides ishibhile GH (ozokusebenzisa);
- umphumela ezihlukahlukene on indlala futhi umzimba, okuvumela ukuba makudle eyodwa noma nezinye izinto;
- peptides kungukuthi kushushiswe ngumthetho, okuvumela ngokuphepha uyithenga intanethi noma kusukela kubathengisi sivunyiwe;
- ngenxa ukubhujiswa okusheshayo engabonakali ukulawula doping;
- ngenxa izindlela ezahlukene isinyathelo futhi isigamu-nokuphila kungenzeka lokuxhaphaza ijika lokuhlushwa ngenxa elilungile impendulo Anabolic.
Manje phenya izidakamizwa langempela. Yiziphi peptides sawo esiningi kakhulu? Ake sizame ukuthola. Abasubathi futhi amadoda ohola yokuphila asebenzayo kusiza peptide "Testagen". Kusekelwe phezu tetrapeptide futhi usiza ukubuyisela ukusebenza evamile testes amaseli banesibopho Ekudalweni kabusha kwesidoda futhi, yini ebaluleke ngaphezu kwalo sawo esiningi, ukunakekela oyifunayo ezingeni kwe-testosterone. Lokhu kuvumela uhlelo peptide ngokwemvelo ukwandisa ezingeni le hormone, okwenza kube ephephile kuka Ama-anabolic steroid. Izidakamizwa "GHRP-6" futhi "Hexarelin" futhi manje peptides ethandwa. Inzuzo enkulu kubo, okuyinto abasubathi elingalodwa, iwukuba ube namandla athe xaxa, futhi ukwandisa impumuzo kwemisipha. Kusho "GRF (1-29)" noma "Sermorelin" - a peptide ukuthi kuvusa uketshezi hormone ukukhula. It has a encane isigamu-ukuphila emzimbeni (imizuzu embalwa), ingabe akukhona ukuba ukufinyelela emakamu esiphezulu GH. Ukuze ulungise lokhu ukungaqondi kahle, ku ukulandelana izimali ezengeziwe engezwe 4-amino acid, esangenza ukunweba-yehora.
Njengoba singabona, zonke lezi izidakamizwa zidlala indima ebalulekile, ngoba ngosizo lwabo yanda kakhulu ukukhula kwemisipha. Nokho, awayona ingozi ukuze bodybuilders impilo ngokwabo. Namuhla, abasubathi ziya ziba mandla ekusebenziseni peptides sawo esiningi, ukubuyekezwa zazo ukuthi babeshaye esikhonkosini. Phela, lo mdlalo kungekho side effects kanye ekuthuthukiseni zonke izinkomba kubaluleke kakhulu.
Yiziphi izivivinyo ezinesisindo 16 kg